Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Beledweyne | KEYDMEDIA ONLINE
Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Beledweyne
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku geeriyooday weerar Bambaano ah oo lagu qaaday maqaayad ku taallo Beledweyne.
MUQDISHO,Soomaaliya - Ugu yaraan hal ruux ayaa ku geeriyooday, halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen weerar Bambaano ah oo xalay fiidkii lagu qaaday maqaayad lagu shaaxo oo ku taallo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Weerarka ayaa waxaa geystay kooxo hubeysan oo aan heybtooda la garan, waxaana la sheegayaa in ruuxa geeriyooday ay aheyd Haweeney goobta ku sugneed, sida goob joogayaal ku waramayaan.
Ciidamada amaanka Beledweyne ayaa qaraxa kadib goobta soo gaaray, iyagoona halkaas ka bilaabay baaritaan ay ku baadi goobayaan kooxdii weerarka soo qaaday oo la aaminsanyahay in ay ka tirsanyihiin Ururka Al-Shabaab oo maamulo meelo ka mid ah Soomaaliya.
Halka uu qaraxa ka dhacay oo ah Suuqa Xoolaha Beledweyne ayaa waxaa u dhow saldhiga ay leeyihiin ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan, gaar ahaan kuwa Jabuuti.
Magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca qaraxyada nooca bambaanooyinka ah ee loo adeegsado in lagu weeraro goobaha ay bulshada isugu timaado iyo fariisimaha ciidamada dowladda.